Saneey Cabdulle iyo Ciidankiisa oo kusoo biiray Badbaado Qaran | KEYDMEDIA ONLINE
Saneey Cabdulle iyo Ciidankiisa oo kusoo biiray Badbaado Qaran
Xaaladda Muqdisho ayaa Caawa kacsan, iyadoo wadooyinka gala Madaxtooyadda lagu arkay Askar badan iyo Gaadiid dagaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo badan lagu qiyaasay boqolaal askari iyo gaadiid dagaal ayaa Caawa kasoo galay Muqdisho dhanka Siinaay, iyagoo ka yimid dhanka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana imaatinkooda salka ku hayaa afgembiga fashilmay ee Farmaajo.
Askarta oo kamid ah militeriga Soomaaliya, ayaa waxaa hogaaminaya Jen Saneey Cabdulle, kaasoo ku biiray Ciidamadii kale ee Badbaado Qaran, oo difaacyo ka sameystay Caawa nawaaxiga Madaxtooyadda Villa Somalia, kuwaasoo taliyeyaashooda sheegeen inay Farmaajo nolosha kusoo qaban doonaan.
Saneey Cabdulle ayaa magaciisa si aad ah loo bartay bishii April markii sidan oo kale ay Ciidanka Badbaado Qaran uga hor-yimaadeen mudo-korarsiga Farmaajo, waxaana hadda ay dib usoo laabteen si ay uga hortagaan afgembiga cusub ee uu doonayo Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaadey inuu dalka ku qabsado.
Taliyeyaasha Ciidamada Badbaado Qaran, Xubno kamid ah Musharixiinta Mucaaradka, Siyaasiyiin Mahad Salaad, Axmed Maclin Fiqi ku jiraan ayaa la sheegay inay kulan ku leeyihiin Guriga gudoomiyah degmada Deyniile Jacfar oo ku yaalla Siigaale, oo ku dhaw isgoyska Dabka, wadada Villa Somalia aada.
Xaaladda Muqdisho ayaa cakiran, lamana saadaalin karo halka ay ku biyo-shuban doonto, iyadoo Rooble uu derbiga Xafiiskiisa ka fujiyay Sawirka Farmaajo, waxaana uu kulamo la leeyahay Musharixiinta, oo ugu horeeyay CC Warsame.
Beesha Caalamka ayaa ku baaqdey in xaaladda la dejiyo, oo aysan faraha ka bixin, islamarkaana Madaxda ay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka, lana qabto Shirka wadatashiga Qaran, ee uu Rooble ku baaqey, kaasoo la filayay inuu Maanta Muqdisho ka furmo, balse baaqdey arrimaha jira awgooda.